Translate Javanese to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Javanese to Myanmar (Burmese), Javanese to Myanmar (Burmese) translations, Javanese to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Hello, kepiye sampeyan မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Apa ana wong? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Aku seneng banget ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Kaping biaya hamburger iki? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Sampeyan bisa nelpon aku mendhoan? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Nuwun sewu တဆိတ်လောက်
Aku kasengsem ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Pendhaftaran penerbangan wis telat အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Aku nang kene kanggo bisnis ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Halo jenengku မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Aku nyuwun pangapunten, nanging aku nikah ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Aku arep takon sampeyan ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Sampeyan bisa njupuk kula ing bandara? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Apa wektu saiki, mangga? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Endi stasiun polisi sing paling cedhak? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Bisa aku ngutangi pangisi daya telpon? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Isa nulungi aku ora? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Supaya aku ngombe, please? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Pinten punapa biaya? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Aku alergi kanggo gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Telpon dokter ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Apa dokter? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Apa aku bisa nelpon? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Nelpon kula boss sampeyan please. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Panggonan iki apik tenan ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Njupuk kula menyang hotel please ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Apa nomer kamarku? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?